Ogaden News Agency (ONA) – Israa’iil oo Duqaysay Ciidanka Iiraan Kajooga Dalka Suuriya.
Israa’iil oo Duqaysay Ciidanka Iiraan Kajooga Dalka Suuriya.
Posted by Dayr	/ January 22, 2019
Ciidamada Israel ayaa xaqiijiyey inay xalay gantaalo ay ku tuureen saldhigyada ciidamada Iran ay ku leeyihiin duleedka magaalada Dimishiq ee caasimada Suuriya.
Duqeyntan ayey Israel la beegsatay goobaha ay ku sugan yihiin guutooyinka loo yaqaan Al-Qudsi ee ka tirsan Militariga Iran ee gacanta siinaya ciidamada Bashar Al Assad. Telefishinka dowlada Suuriya ayaa sheegay in gantaalada difaaca ee dowladooda soo rideen inta badan gantaaladii laga soo tuuray dhinaca Israel.
Militariga Ruushka ayaa iyaguna sheegay gantaalada Difaaca Suuriya ay soo rideen in ka badan 30 gantaal oo ay soo tuureen militariga Israel. Ma’aha markii ugu horeysay oo ay Israel duqeyso saldhiyada militari ee ku yaal gudaha Suuriya, balse waa markii ugu horeysay oo ay Israel qirato inay weerarkaasi geysatay.
Warbaahinta Suuriya ayaa sheegaysa in afar askari oo ka tirsan ciidamada Suuriya ku dhinteen duqeynta halka ay dhaawacmeen 11 kale, walow ay jiraan warar kale oo sheegaya in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay. Qoraal kasoo baxa Wasaarada Difaaca Israel ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay digniin u ahayd Suuriya inaysan isku dayin inay duulaan kusoo qaado ciidamada iyo dhulka ay Israel ka taliso.